Ahoana ny fomba fanadiovana ny cache amin'ny fampiharana amin'ny Android | Androidsis
Ahoana ny fomba fanadiovana ny cache amin'ny fampiharana amin'ny Android
Aaron Rivas | | Tutorials
Raha tsy tsikaritray izany dia mety ho feno ny fahatsiarovana ny fitaovana Android na dia tsy mametraka rindranasa vaovao aza izahay, misintona mozika, fisie, sary na zavatra hafa. Fa maninona no izao? Eny, ny antony lehibe indrindra dia ny fanatanterahana ny rindranasa finday. Isaky ny manokatra sy mihazakazaka isika Matetika no noforonina ireo rakitra tsy maharitra izay maka habaka amin'ny fahatsiarovan'ny fitaovana; cache ireo.
Amin'ity lahatsoratra ity dia manazava izahay Ahoana no ahafahanao mamafa ny cache amin'ny rindrambaiko Android anao. Noho izany antony izany dia hanana toerana bebe kokoa isika hisintomana izay tadiavintsika na haka sary, handraisana horonantsary na fanamarihana. Tohizo ny famakiana!
Ny cache dia karazana fahatsiarovana fanampiny. Ny karazana fisie vetivety rehetra dia voatahiry ao, izay no noforonina rehefa mihazakazaka fampiharana na lalao isika.
Ny fisie vonjimaika dia tsy ilaina amin'ny fampandehanana tsara ny rindranasa, na dia amin'ny asany tsotra aza. Na dia eo aza izany dia mitaona ny famonoana ireo amin'ny fomba tsara izy ireo, satria ampiasain'ny rafitra "hahatadidy" mora kokoa ny fizotrany hampandehanana azy ireo. Na izany aza, rehefa angon-drakitra maro no voatahiry ao anaty cache, dia tsara ny hamafana azy, na, hamafana ny cache amin'ireo rindranasa ireo.
Ahoana ny fomba fanadiovana ny cache amin'ireo rindranasa ao amin'ny Android anao
Ny fomba fanafoanana ny habaka amin'ny findainao amin'ny alàlan'ny fanadiovana ny cache app Tsotra be izy io. Voalohany indrindra, nilaza izahay fa mety hiova kely arakaraka ny maodelin'ny telefaona, marika, sosona fanamboarana ary ny kinova Android, ary koa ny nomenclature an'ireo teny ireo. Ireto ny dingana manaraka:
Amin'ny finday Android, mankany isika fanahafana o Fikirana.
Rehefa tonga eo, ao amin'ny fizarana fitaovana, handeha isika fampiharana. Ho hitantsika fa miseho daholo ireo rindranasa napetraka sy efa napetraka mialoha ao amin'ilay rafitra.
Misafidy rindranasa iray izahay ary miditra Sehatra fitahirizana.
Hiseho izy ireo aorian'ny safidy: ny iray hanova ny toerana misy ny fampiharana, na ny fahatsiarovan'ny fitaovana na ny microSD; iray hafa manala ny angona rehetra ao aminy; ary ny farany, izay hanomezanay anao, hanafoana ny cache, izay milaza manokana HAMANAO CACHE FAHATSIAROVANA.
Manoro hevitra izahay ny hanatanteraka an'ity fomba ity amin'ny fampiharana tsirairay ao amin'ny fitaovana ary manao izany tsy tapaka, mba sorohy ny fitohanan'ny fitadidiana an-telefaona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fomba fanadiovana ny cache amin'ny fampiharana amin'ny Android
Razer Phone 2 Endri-javatra sy famaritana
Oppo K1: ny elanelam-potoana vaovao misy mpamaky rantsantanana tafiditra ao anaty efijery